China HRC65 Carbide 2 Flute Micro End Mill abavelisi kunye nabathengisi | Mingtaishun
Oko kwasekwa inkampani yethu, siye saqonda ukubaluleka kokubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo eziphambili ngaphambi kokuthengisa kunye nasemva kwentengiso. Uninzi lweengxaki phakathi kwabathengisi behlabathi kunye nabaxhasi ngenxa yokunxibelelana okungalunganga. Ngokwenkcubeko, ababoneleli banokuba mathidala ukubuza izinto abangaziqondiyo. Siphula ezo zithintelo ukuqinisekisa ukuba ufumana le nto uyifunayo ukuya kwinqanaba olilindeleyo, ngexesha olifunayo.
Sinamava aneleyo ekuveliseni iimveliso ngokweesampulu okanye imizobo. Sibamkela ngokufudumeleyo abathengi abavela ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba batyelele inkampani yethu, kwaye basebenzisane nathi kwikamva eliqaqambileyo kunye.
Ukwaleka: I-AlTiSiN, enobunzima obuphezulu kakhulu kunye nokumelana nokunxiba okuhle, i-AlTiSiN ikwasisicelo esifunekayo: sisetyenziswa ngokubanzi kuMatshini, i-aerospaee, imoto kunye nezinye iindawo zokuvelisa ezichanekileyo.
Ububanzi D. Ukucanda ubude Lc Ububanzi beShank d Ubude bebonke L Iimbande
* Sebenzisa izinto ezithandwayo, ubulukhuni obuphezulu kunye nokuqina okuhle okuphezulu
* Sebenzisa i-nano-tech, ubunzima kunye nokuzinza kwe-thermal kuye kuthi ga kwi-4000HV kunye ne-1200 ℃, ngokwahlukeneyo.
* 2 Iifluti, zilungile ekususeni i-chip, kulula ekusetyenzisweni nkqo kokutya, okusetyenziswa kakhulu kwisolt nakwimingxunya yokulungisa
* Ifanelekile ngentsimbi yeCarbon / i-Allpy yesinyithi / i-Iron iron / i-Stainless yentsimbi / i-Hardened steel
Nceda uvumele i-1-5mm iimpazamo ngenxa yemilinganiselo yesandla.
Umbala wento eboniswe kwiifoto unokubonisa okwahlukileyo kwikhompyuter yakho yokujonga kuba iimonitha azilinganiswanga ngokufanayo.
Egqithileyo I-HRC65 Carbide 4 yokuGqibela ukuRhabaxa kweMill Mill
Okulandelayo: Ubude beHRC65 yeCarbide Umgangatho we-2